MDS | Returns
Online မှ ဝယ်ယူထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ပြန်လဲလှယ်နိုင်ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်ပါသလဲ?
၁. ပြန်လဲလှယ်နိုင်တဲ့အချိန်ကာလကို ပစ္စည်းလက်ခံရရှိသည့်အချိန်မှစ၍ ၇ရက်(ပိတ်ရက်များမပါ) သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ MDS Myanmar ဆိုင်များတွင် ကိုယ်တိုင်လာရောက်ထုတ်ယူတဲ့ ပစ္စည်းများကိုတော့ ပစ္စည်းလာထုတ်ယူတဲ့နေ့ကနေ စတင်ရေတွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၂. ပစ္စည်းများမှာ ဝတ်ဆင်ပြီး မဖြစ်ရ။ အစွန်းအထင်းများ၊ ပြန်လည် လျှော်ဖွတ်ထားခြင်းများ၊ အမွှေးအနံ့များရှိမနေရပါ။ မူလဝယ်ယူခဲ့စဉ်ကအတိုင်း သန့်သန့်ရှင်းရှင်းနှင့် ဈေးနှုန်းတံဆိပ်များ ရှိနေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နားကပ်များနှင့်အတွင်းဝတ်များကိုတော့ ပြန်လည်လဲလှယ်ရန် လက်ခံပေးမည်မဟုတ်ပါ။
Promotion ဖြင့်ရောင်းချထားသော ပစ္စည်းများကိုလည်း ပြန်လည်လဲလှယ်ရန် လက်ခံပေးမည်မဟုတ်ပါ။
၃. ပြန်လည်လဲလှယ်မည့် ပစ္စည်းများကို MDS Myanmar ရုံးချုပ် (အမှတ်၉၀ (A/B) ၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်)ကို ပေးပို့ခြင်း (သို့မဟုတ်) သတ်မှတ်ထားသော MDS Myanmar ဆိုင်ခွဲများကိုလည်း လူကိုယ်တိုင်သွားရောက်ပြန်ပေးနိုင်ပါတယ်။ MDS Myanmar ဆိုင်ခွဲများသို့ ပေးရာတွင် ဆိုင်ဝန်ထမ်းများမှ ကြိုတင်စစ်ဆေး၍ လက်ခံထားပြီး ရုံးချုပ်သို့တဆင့်ပြန်လည် ပို့ပေးမည်သာဖြစ်သည့်အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရုံးချုပ်ကသာ ပြုလုပ်ပေးမည်ဖြစ်ပါတယ်။
၄. ပစ္စည်းများကို ပြန်လည်လဲလှယ်ရာတွင် MDS Myanmar မှပြန်လည်လက်ခံရရှိသည့် နေ့မှစပြီး ဆောင်ရွက်ချိန် ၁၅ရက်အထိ ကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ လဲလှယ်မည့်ပစ္စည်းအရေအတွက်များလျှင် ရက်၃၀အထိလည်း ကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ ပြန်လဲလိုသည့်ပစ္စည်းများသည် စည်းကမ်းချက်များနှင့် မကိုက်ညီပါက ပြန်လည် လဲလှယ်ပေးမည် မဟုတ်ပါ။
၅. ငွေသားပြန်လည်ထုတ်ပေးမည်မဟုတ်ဘဲ Store Credit ကိုသာပြန်လည်ပေးအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ MDS Subscription ဖြင့်ဝယ်ယူထားသော Subscriber များကိုလည်း Credit ၁ခု ပြန်လည်ပေးအပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
၆. ပြန်လည်လဲလှယ်ရေးအချက်အလက်များကို ပိုမိုသိရှိရန် ကျေးဇူးပြု၍ MDS Myanmar ရဲ့ အမေးအဖြေ ကဏ္ဍ (FAQ) သို့ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုပေးပါ။
ဆိုင်ခွဲတွေမှာ ဝယ်ယူထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ပြန်လဲလှယ်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေလိုအပ်လဲ?
၁. MDS Myanmar ဆိုင်ခွဲများတွင် ဝယ်ယူထားသူများအနေဖြင့် ပစ္စည်း၏ Size အားပြန်လဲလိုပါလျှင် Size ရှိပါက ဝယ်ယူထားတဲ့နေ့မှ ၇ရက်(ပိတ်ရက်များမပါ)အတွင်း လဲလှယ်နိုင်ပါတယ်။
Promotionဖြင့် ရောင်းချထားသော ပစ္စည်းများကိုလည်း ပြန်လည်လဲလှယ်ရန် လက်ခံပေးမည်မဟုတ်ပါ။
၃. လဲလှယ်မည့်ပစ္စည်း၏ဘောက်ချာယူလာဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ MDS Myanmar အနေဖြင့် လာရောက်လဲလှယ်သော ပစ္စည်းများအား ငွေသားပြန်လည်ထုတ်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။
The return deadline is set to be 7days (excluding holidays) since you received the parcel. For MDS Myanmar click & collect orders, the return period starts from the day you collect your parcel.
Items must be unwashed and unworn with the hang tag & price tag attached and accompanied by your order invoice. We do not accept returns for earrings & lingerie due to hygiene purposes. Sale and promotional items are not eligible for returns.
You may either mail your item back to our office (No.90 (A/B), Kabar Aye Pagoda Road, Bahan Township, Yangon) via mail or return in person at selected MDS Myanmar outlets. For returns via outlets, our retail assistants will receive items uponapreliminary inspection. However, do note that the final inspection of returned items and decision to accept returned items will be made only by the MDS Myanmar Head Office.
Processing of returns take up to 15 days from the receiving date at MDS Myanmar Head Office. It may take up to 30 days during high volume periods. MDS Myanmar Management reserves the final right to reject your returned goods if they do not comply with our regulations.
Cash will not be refunded. Instead we will refund you Store Credit. For items bought via Subscription Credits, we will refund you Subscription Credits.
For more information on returning goods, kindly visit our FAQ page under returns policy for more details.
What is your return policy for items purchased in retail outlets?
For retail stores, we allow up to7business days (without holidays) for size exchange from the date of purchase, if we have your desire size in stock.
You are also required to produce your receipt and do note that refunds are not allowed.